I-Semalt Expert icacisa indlela yokujongana ne-Spam Referral kwi-Google Analytics
Ukuba uqaphela ukuba iwebhusayithi yakho ithola ininzi yezothutho kunye ne-data iboniswa kwi-Google Analytics yakho, awunabo bodwa njengabantu abaninzi baye bajamelana nengxaki efanayo. Uninzi lwezothutho lwedolophu lugaxekile kwaye lufanele lulahleke ngokukhawuleza. Ukuqhutyelwa kwe-spam entsha kuwonakalisa idatha kwiGoogle Analytics ngokubanzi. Abahlaseli abagcini nje ukutshabalalisa indawo yakho kwisayithi injini yosesho iziphumo kodwa zifumana amanqanaba angcono kwiiwebhusayithi kunye neeblogi. Ingxaki kukuba indlela amashishini amancinci angakwazi ngayo ukujongana nokuthunyelwa kogaxekile nokunyusa inani leembono kwiindawo zabo.
U-Ivan Konovalov, uMphathi wePlayer Success Semalt , unika apha isisombululo esibalulekileyo malunga nokuthunyelwa kogaxekile.
Abahlaseli bavelisa ugaxekile kwi-Google Analytics
Umbuzo wokuqala ophazamisa ingqondo yethu kukuba kutheni abahlaseli nabahlaseli benza i-Google Analytics spam? Abanikazi bewebhusayithi kunye neeblogi zigcina iso kwiGoogle Analytics kwaye zitshintsha izicwangciso zayo emva kwexesha - Ejectors for fuel cells. Basusa kwaye bavala idilesi ze-IP ezikhangelekisayo kwaye zikhusela abantu bokwenene ekutyeleleni amaphepha akho ewebhu. Uninzi lwabahlaseli basebenzisa ukuthunyelwa kogaxekile ukuze kuveliswe kunye neentengiso zokukhohlisa. Ngaphezulu, bayisebenzisa ukusabalalisa ii-virus kunye ne-malware kunye nokuhlaselwa kwama-phishing nsuku zonke. Ukuba kwenzeka ukuba ubone ezinye iiwebhusayithi ezinokukrokra kwidatha yakho yokudlulisa, akufanele unqakraze loo ndawo uze uyikhuphe kwi-Google Analytics ngokukhawuleza..
Ukusetyenziswa kogaxekile kwenzeka njani?
Ngexesha lokungena kwexesha, i-Google iye yazisa ezininzi iimveliso kunye neenkonzo ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko kunye nekhuseleko lakho kwi-intanethi. Ungasebenzisa iimpawu kunye neenketho zokugcina isayithi lakho likhuselekile kubadlali bahlaseli. Ulandelelwano lunokwenziwa ngeenombolo ezikhethekileyo kuzo zonke iipropati. Elinye ipropati lithetha ukuba ungasebenzisa inombolo enye yomzila okanye ikhowudi ukuba uqikelele ukuba ingaba isayithi yakho ifumana ityala elivumelekileyo okanye cha.
I-Google Analytics ivumela abasebenzisi bayo ukusebenzisa iipropati ezingama-50 kwi-akhawunti. Kuthetha ukuba unayo i-AdSense, kufuneka ufumane inombolo enye yeeriti nganye kwipropati. Inombolo ye-UA, okuthetha i-Urchin Analytics, igama leMveliso yakwaGoogle kwiminyaka kubasebenzisi bayo. Idijithi yayo ephakathi yile nombolo ye-akhawunti oyifanele ukuyisebenzisa ngelixa udala ipropati. Zonke iipropati kwi-akhawunti enye ye-Google Analytics inokwabelana ngenani elifanayo.
Kananjalo, i-Google Analytics isinika iindlela zokuhlunga. Kuchanekileyo ukudala izihlungi kunye nokuhlaziya izicwangciso ze-Analytic njengendlela yokuziphatha entsha kunye namaqhinga. Uninzi lwezikhokelo kunye nezifundo ziyafumaneka kwi-intanethi ngokukhupha ugalelo logalelo. Unokugcina umgangatho wedatha yakho kwi-Google Analytics ngokulungisa izicwangciso.